17 | May | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
It isacheapest option. No need to send troops, no need to bomb, no need to invoke R2P, no need to send drones to take them out, refugee problems will reduce, no need to introduce the economic sanctions ….
Need to investigate, arrest this criminal Min Aung Hlaing who is protecting the extremist terrorist Wirathu
Need to investigate, arrest this criminal Min Aung Hlaing who is protecting the extremist terrorist Wirathu.
This is the evidence given by the Daw Suu’s NLD Government Minister of Religious Affairs. Minister revealed that they could not arrest Wirathu because Karchoke (Min Aung Hlaing) himself is protecting him.
Global Witness ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့မှ ” မြန်မာအပါဝင် တထပ်တည်း ဆင်တူလှသော ကမ္ဘာ့သူခိုးများနိုင်ငံတွေ…”
ရင်နင့်ဖွယ် အကြွေပန်း (၆) ပွင့်
Alin Myet Wyun
👨‍👩‍👧‍👧 💐 💐 💐 💐 💐 💐 👨‍👩‍👧‍👧
🕒 ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ မေလအလယ်ပိုင်းနေ့ရက်တစ်ခုရဲ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၃)နာရီလောက်မှာ…
😠 ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး အနီရောင်ပိတ်စ ခန္ဒာကိုယ်ပေါ် သိုင်းပတ်ထားတဲ့ လူတချို့နဲ့အတူ ဒုတ်၊ ဓား၊ ပုဆိန် အစရှိတဲ့ လူသတ်လက်နက် ကိုယ်စီ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေ…
💥 တောင်ငူမြို့၊ မန်းရပ်၊ ကန်တော်လမ်းမှာ တဖြည်းဖြည်း စုရုံး ရောက်ရှိလာပြီးနောက် နေအိမ်၊ တိုက်တာ၊ အဆောက်အဦးတွေကို အုပ်စုလိုက် ဝင်ရောက် ဖျက်ဆီး လုယက်ကြပြီးနောက်…
🔥 နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင် ဆက်လက်၍ နေအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြလေရာ…
“ ပါပါး မီးမီးတို့ ဒီရေကန်ကြီးထဲက ဘယ်တော့ အပြင်ကိုထွက်ရမှာလဲဟင် ”
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု အမှန်တကယ် ဖြစ်နေပြီလား”
BY NYAN LYNN · MAY 11, 2017
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆူဒန်၊ ယီမင်နိုင်ငံတို့နဲ့အတူ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်နိုင်ခြေအရှိဆုံး ထိပ်ဆုံးသုံးနိုင်ငံထဲမှာ ပါဝင်နေတယ်လို့ Early Warning Project လို့ခေါ်တဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း (NGO) က ဧပြီလအတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုတွေမဖြစ်ခင် မူဝါဒရေးဆွဲသူတွေ ကြိုတင်ဟန့်တားကာကွယ်လို့ရအောင် ဒီအဖွဲ့ကအချက်အလက်တွေ ပံ့ပိုးပေးပြီး သတိပေးတဲ့အဖွဲ့ပါ။
သူ ဒို့ တ တွေ တ ရား သူ ကြီး တွေ ဘာ လုပ် မယ် ဆို တာ ကြို တင် သိ နေ နိုင် တဲ့ powerful ဆဌမ အာ ရုံ များ ရ နေ သ လား
Myo Win Thant
” ဆဌမ အာ ရုံ ရ နေ သူ များ ”
မင်္ဂလာ တောင် ညွှန့် ကိစ္စ ။ အ မူ့ ဖွင့် အ ရေး
ယူ ခံ ရ သူ7ဦး မှာ နှစ် ယောက် ဘဲ ရဲ က နေ
လက် ရ ဖမ်း မိ ပြီး ကျန် ၅ ဦး လွတ် နေ တယ်
လို့ ကြေ ငြာ ထား ခဲ့ တယ် ။ ဖမ်း ဝ ရမ်း လဲ
အ ပီ အ ပြင် ထုတ် ပြန် ထား ခဲ့ တယ် ။